Tilmaamaha Yurub By tareenka In 3 Weeks | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Tilmaamaha Yurub By tareenka In 3 Weeks
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 19/08/2020)
A safarka safarka ka sugayeen waa in ay u safri Europe tareen. Waxaa si degdeg ah noqoto doorbiday bey'ada saaxiibtinimo safarka habka. safarka, in nuxurka, ma aha oo kaliya balaarineyso jahooyinka our laakiin balaarineyso our muuqaal. Ka fakar St. erayada goolasha Augustine ee, "Caalamku waa buug iyo kuwa aan samayn safarka, akhriyo hal bog oo kaliya ".
In this casriga ah-bixio, digital age connection is fast and furious. Iyada oo dhammaan ka mid ah faa'iidooyinka ay, waxaan lumin la xidhiidha qaybta ugu muhiimsan ee u safraya iyo nolosha, waqtigan xaadirka ah. Tareen safarada iyada oo Europe dhiirrinaya, waa raaxo iyo jaceyl.
Waayo, kuwa naga mid ah oo aan ku nool nahay wadan ay safarka tareenka waa caan ah, waxay noqon kartaa u quudhin a dahsoon. caarurta kale oo weyn oo safar tareen Yurub waa in, madaarada duwan, saldhigyada tareenka Yurub ku yaalaan midigta dhexe ee magaalooyinka. Waxaa jara kharashka loo baahnayn of our jeebkiisa, safarkana jar soco.
By doorashada tareen dhex Europe, waxa aanu doorashada hab safarka na galaan doonaa ma aha oo kaliya, laakiin ay noogu suurto gasho in ka sii badan intii aan caadi ahaan lahaa arki. Mid ka mid ah wadada sida fureysaa laba iyo toban xooga weyn ee Yurub oo waxaa lagu sameeyey oo ku saabsan 3 todobaad. Akhri si aad u ogaato sida ay u safraan European Cup By tareenka In 3 Weeks.
Tilmaamaha Yurub By Day tareenka 1: Vienna, Austria
Tareenka ayaa iyada oo safar Europe ee bilaabmaa Vienna, caasimada Austria ah. Laba maalmood ka ammaanta leh oo suga quudhin. waddooyinka Baroque iyo daaraha waaweyn Imperial dhigay midab ku soo bandhigaan farshaxanka, naqshadda, masterpieces dhaqanka iyo muusikada. Tani waa ka garab ay dhaqanka coffee-guriga ka masayreen iyo Muuqaallo design firfircoon.
mumok waa waajib-sameeyo marka ee Vienna. Waxaa la og yahay in ay wax-uqabso iyo mararka qaar la yaab leh ihi farshaxankii, oo ay ka mid shuqullada by Pablo Picasso iyo Andy Warhol. The ururinta ee guud ahaanteed ka kooban yahay ku dhawaad 10,000 farxaan farshaxanka.
Your tareen dhex Europe sii, faqri maalin magaalada Austria ee Salzburg. Waa on soohdinta reer Germany oo uu leeyahay views cajiib ah ee Alps Eastern. Salzburg ayaa sheegay in warkiisii ​​waa in ay magaalada story-buugga in ay ahayd mar guriga laxamiistaha ugu weyn dunida ee, Mozart.
hills The nool ee Salzburg yihiin. Waxaa hal mar loo isticmaalaa sida meel filim ee aadka u marsiiyey, 'Sound of Music' oo waxaa jira dareen ah u dareemi of abuurka iyo farshaxanka. Waxa kale oo macaashal dagganaashiyo xasilloon a.
Tilmaamaha Yurub Maalmaha 3: Munich, Germany
Labada joogsato soo socda on tareen iyada oo Europe yihiin Munich iyo Stuttgart ee dalka Germany. Waxay noqon lahayd ugu fiican ee ku qaataan maalin kasta oo ka mid ah Meelaha caanka ah.
Munich oo ay dhaxal ahaan Bavarian meesha biirka iyo dhaqan yaynana kolna ayaa sameeyay qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka, qarniyo ku dhawaad ​​todobo. Oktoberfest waa on sare ee liiska ku Munich. Waxaa la xusaa by malaayiin dad ah in booqashada dhan ka dunida dacaladeeda,, inay ka qayb-xaflado ah.
Stuttgart ayaa dareenka ah xarrago, halkaas oo baabuurta iyo maqaayado sheeegateen oo degdeg ah loo abuuro ambiance ah nolosha casriga ah, laakiin waxaa jira wax dheeraad ah si ay u Stuttgart ka badan oo casri ah. Stuttgart ayaa Makhaayadood khamri iyo xabadka-lowska hadhka Jannooyin biir muujinaya in daafaca dhigay a, cagahaaga laado ka yeellay korkoodii.
Munich in ay Tareenadu Stuttgart
Heidelberg in Tareenadu Stuttgart
Tilmaamaha Yurub Maalmaha 5: Strasbourg, France
Laddaaga ka dib on tareenka, waxaa off in France! Bixiya maalin ee Strasbourg.
Strasbourg miisaamaya dhexeeya ee la soo dhaafay a Dr Makumbe iyo mustaqbal horumar leh. Its Gothic Cathedral waa yaab naqshadda and roaming through the old town’s twisting alleys and enjoying tavern food comes highly recommended.
Maalmaha 6 – 8: Paris, France
Paris baahan yahay hordhac yar ay naqshadda dhismaha taariikhi ah oo ay ka mid Tower Eiffel, de Arc ku Triomphe, iyo Dame Notre ee Cathedral. Eraygii PSG uu macnihiisu yahay style iyo sabab wanaagsan. Filo cunnada-heer caalami ah, shopping, iyo balbalooyinkii ku jira ilo aan dhamaanayn oo ah waxyi iyo Nicmo. The safar tareen fiican Yurub mar walba ka mid noqon doona magaaladan caan.
Tilmaamaha Yurub Maalmaha 9 & 10: Brussels, Belgium
Marka Paris ayaa wooed la hindiga, qaataan labada maalmood ee soo socda ee Brussels, ka hor inta uusan lugta tareen soo socda. Laba maalmood ka ee Brussels ka koobnaan doonaan guriyo Deco farshaxanka iyo booqashada ku square Grand Palace. Waxaa ku yaalaa wadnaha ee magaalada, halkaas oo 17th ee la soo dhaafay qarnigii u imanayaa inuu nolosha.
Maalmaha 11 – 13: Amsterdam, Netherlands ayaa
Amsterdam waa meesha aad safar ku teedsan kanaalada taariikhi ah, taas oo ah mid caadi ah, iyo Dooxa dhex matxafyada iyo dukaamo guridda ka buuxo. Cabidda, cuntada iyo design Muuqaallo enthrall iyo iyahoo. Amsterdam waa magaalo la yaab iyo hoy u tahay ee museum Van Gogh iyada oo sidoo kale ka mid ah khasnadaha kale soo bandhigay.
Tilmaamaha Yurub Maalmaha 14 – 17: Bremen & Berlin, Germany
dib Head in ay Germany ka nafaqeeya shan maalmood on tareenka iyada oo Europe ee Bremen, Berlin, iyo Dresden. Maalin maalmaha ka mid for Bremen (sawirka hoose), booqashada matxafyada badan iyo balbalooyinkii sida Overseas Museum Bremen ah. Waa magaalada dekedda ah, Bremerhaven waa meesha aad ku raaxaysan badda cusub oo ay bartaan oo ku saabsan taariikh dekedda xiiso.
Berlin u baahan doonaa saddex maalmood ee bilowga ah. Berlin leeyahay sumcad sida isagoo ah 'magaalada oo aan weligood seexdo'. Ka faa'iidayso ay nashaadka! Habeenada waxaa loogu diyaafadda iyo maalmaha waxaa loogu raad dhaqanka.
Dresden u baahan yahay oo keliya maalin, yaabteen sida ay Grand wadini iyo Versailles-u waxyoonay Zwinger guryaha madaxtooyada matxafyada ay. Magaalada ayaa waxaa loo aasaasay in 1743 oo waxay lahaayeen in dib loo dhiso ka dib Dagaalkii Adduunka 2. Waxaa la soo naaneeso 'Florence ee Elbe ah’ si ay meesha idyllic mahad.
Tilmaamaha Yurub Maalmaha 19 – 21: Prague, Czech Republic
safarka tareenka ee Europe dhamaado Prague, ka dib markii dabayl cirwareen ah oo yaab. Prague waa magaaladii spiers oo waxaa inta badan marka la barbar dhigo quruxda Paris. Waxaa sidoo kale tilmaamay in ay hoy u tahay biir ugu fiican Yurub. Ku raaxayso lanooga of a 14th qarnigii buundada dhagax, qalcaddii hilltop iyo webi caajis. Waa habka ugu kaamil ah si loo soo afjaro safar tareen ah iyada oo Europe.
The safar tareen fiican Yurub Hubi in aad tahay raaxo leh ka dhigi doonaa iyo nasasiiyay. Mahad muuqaal ah jidka, ammaanka safraya tareen iyo Tuujiya sida indhaha ku badan intii suurto gal in. Waxaa jirta waddo wanaagsan in safarka no. Kitaabka la Save A tareenka maanta!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Tilmaamaha Yurub By tareenka In 3 Weeks” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-highlights-by-train%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / TR si / de ama / es iyo luuqado badan.
#traveleurope EcoFriendlyTravel EuropeanHighlights europetravel tareen safarka